Eventbrite + Teespring: Ree T-uwe elu Gị Tiketi | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 28, 2016 Friday, April 29, 2016 Douglas Karr
Anyị na-arụ ọrụ kwa afọ egwu na teknụzụ ememme na Indianapolis kwa afọ. Ọ bụ nnukwu ihe omume ebe anyị na-eweta ndị otu mpaghara ma na-ewepụ ezumike iji mee mmemme mpaghara yana ị nweta ego maka Ọrịa leukemia & Lymphoma Society.
Agencylọ ọrụ anyị bụ onye nkwado bụ isi nke ihe omume ahụ, mgbe ahụ anyị na-enwetakarị ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji kpuchie ụgwọ ndị ọzọ. Agbanyeghị, nkwado nkwado na-abata n'oge ikpeazụ… anaghị ahapụ oge maka ịhazi nnukwu!
Daalụ ịdị mma maka nkà na ụzụ, ọ bụ ezie! N'afọ sochirinụ, anyị ga-agbanwe usoro ihe omume ahụ ntakịrị ma na-achịkwa ya. Otu nnukwu echiche na anyị ga-emejuputa nke ọma bụ ohere ijikọ ahịa nke tiketi anyị tinyere t-shirts omume. Emecha na Teespring nwere Mbido dị nnọọ usoro. Dị nnọọ tinye Ngwa Teespring na ihe omume gị ma tinye t-shirt gị.
Mmekọrịta Eventbrite na Teespring na-enye gị ohere ibugo ihe osise ngwa ngwa na ngwa ahịa, tọọ ọnụahịa gị, ma mepụta ibe ịntanetị ozugbo ebe ndị bịara na ndị na - akwado ya ga - azụta site na. Ngwa ahia gị na-akwalite na mmemme mmemme gị.
Mgbe ọ bụla ịchọrọ ka mkpọsa gị kwụsị, Teespring ga-ebipụta, tinye ma nyefee ndị ahịa gị ụwa niile iwu. Soro ndị bịara gị soro gbalịa!
Ngosipụta: Nke ahụ bụ nke anyị Mmemme Ntuziaka Eventbrite njikọ.
Tags: ndebanye aha mmemmeihe omumeusọrọngwá ahịaahia ahiauwe eluna -agbagharịtiketi